YEYINTNGE(CANADA): Sunday, November 02
ဥပဒေအထက်၌ မည်သူမှ မရှိစေရ သို.သော်..............................
တပ်ကြပ် ဇော်မျိုးဦးမှအရပ်သားပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သူမောင်လေးနိူင်(ခ) မောင်ရဲနိူင်
အသက်၂၉ နှစ် (အဘ ဦးခင်ဌေး )အား ထိုးကြိတ်ကန်ကြောက်ရာမှ နောက်စေ့နှင့်
၂၇.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့မနက် ၉ နာရီကျော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်အား
သေဆုံးသူ၏ မိသားစုဝင်များမှ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဝေဘာဂီရဲစခန်းသို့ 
၂၈.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် သွားရောက်အမှု့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ ဒုရဲအုပ် ဇင်မင်းထွန်း မှ
ပ/၃၁၅/၂၀၁၄ ဖြင့် ပုဒ်မ ၃၂၅/၃၀၄(က)ဖြင့် အမှု့ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
တရားခံအား ရဲစခန်းမှ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းများ မပြုလုပ်ပဲ စစ်တပ်သို့ပြန်လည်
အပ်နှံပေးခဲ့သည်။၎င်းဖြစ်စဉ်နှင့် ပက်သက်၍ ယနေ့ အချိန်ထိ လူမှု့ရေးအရသော်
လည်ကောင်း လာရောက်မေးမြန်းခြင်း မရှိခဲ့။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်လည်း
မည်ကဲ့သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်ကိုစိုးစဉ်းမျှ မသိရှိရသေးပါ။
သေဆုံးသူ မောင်ရဲနိူင်၏ ရုပ်အလောင်းအား ၃၀.၁၀.၂၀၁၄ ရက်နေ့ နေ့ လည်
၁၂ နာရီခွဲ အချိန်တွင် ရေဝေးသုသာန်၌မီးသင်္ဂြုလ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။မိသားစုဝင်များ
အနေဖြင့် ယနေ့ အထိတိုင် ကြေကွဲ ခံစားနေရပြီး အမှန်တရား အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်
လာနိူင်စေရန် အကူအညီ လိုအပ်လျက်ရှိပေသည်။
အမှတ် (၁၀/က) ဋ္ဌ ရပ်ကွက် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ဖြစ်သည်။
အမှန်တရားပေါ်ပေါက်လာစေရန် ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြေရှင်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံ
ရေးသားတင်ပြသူ - ကိုမင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/02/20140အကြံပြုခြင်း
နောက်တစ်လှမ်းဆုတ် ရှေ့နှစ်လမ်းတိုး ဗျူဟာဖြစ်သည်
ရှေ့တစ်လှမ်းတိုး နောက်နှစ်လှမ်းဆုတ် ဗျူဟာဖြစ်သည်
တင်စား ထားသော ဗျူဟာဖြစ်သည်
ယခု ဦးသန်းရွှေကျင့်သုံး နေသောဗျူဟာမှာ
ရှေ့နှစ်လမ်းတိုးကာ ဟန်လုပ်အယောင်ပြ သောဗျူဟာဖြစ် သည်
ပုဒ်မ ၄၃၆ မပြင်ဆင်လို ကြောင်း နှင့်
ဦးသန်းရွှေ၏ ယောင်ပြရှေ့နှစ်လှမ်းတိုး လုပ်ရပ်များပင်ဖြစ်သည်
နိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှု နှင့် ပြည်သူများ၏ နိုင်ငံရေးနိုးကြားလာမှု
များအောက်တွင် ဦးသန်းရွှေ ပြေးပေါက်မှားနေပြီဖြစ်သည်
ပြည်သူများက လက်မခံရန်လိုအပ် သည် ဟု
ထောက်လှမ်းရေး ပြုတ် ဦးခင်ညွန့်မှ ပြောကြားသွားခြင်းဖြစ်သည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြစ်ပြီးသမျှတွေကို ခ၀ါချပြီး၊ မေ့ဖျောက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ရှေ့ကို ဆက်လျှောက်မယ်ဆိုတာကို ကျုပ်ကတော့ ယုံသဗျ။ ဒါပေသိ ကျုပ်မယုံတာက မိန်းမလိုမိန်းမရဆန်လွန်းတဲ့ ကသန်းရွှေကြီးကို မယုံတာ။ ဒီလူကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကြည်လင်တာနဲ့ စစ်တက္ကသိုလ်က အောင်ဆန်းတပ်ခွဲဆိုတာကြီးကို ဖျက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ ဘာဆိုင်လဲဗျာ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မကျေနပ်တာနဲ့ ၁၉၄၇ ထဲက သေခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ နာမည်ကိုတောင် ရန်ရှာနေလိုက်တယ်။ DSA က အောင်ဆန်းခန်းမ ကိုတောင် ပြတိုက်လို လုပ်ပစ်လိုက်သေးရဲ့။ နောက်တော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့နာမည် တေဇ အမည်ပါလို့ဆိုပြီး အလုပ်သင်ဗိုလ်တွေရဲ့ တေဇတပ်ခွဲကိုပါ ထပ်ဖျက်ပလိုက်တယ်။ ဒီတော့ကာ ကျနော်တော့ ဒီလူကြီးကို မယုံကြည်ဘူး။ သူ့သမီးကို မကျေနပ်တာနဲ့ လွန်ခဲ့အနှစ်(၅၀) လောက်ထဲက သေခဲ့တဲ့ သူ့အဖေနာမည်ကိုပါ ဖျက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ သိပ်ကို မိန်းမလို မိန်းမရဆန်တာပဲ။ အင်း - မိန်းမတွေနဲ့ ကသန်းရွှေကြီးကို နှိုင်းရတာ မိန်းမတွေကိုတော့ အားနာသဗျာ။ နားလည်ပေးပါ။
ဒီတော့ ဒီလူကြီးက ကန့်လန့်ကာနောက်ကို အသာလေးဝင်၊ သင်ပုန်းချေချင်တယ်ဆိုတာတွေကို ကျနော်က ယုံကို မယုံတာ။ ကိုယ်ကလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်ကထိ သူ့အတွက် အစီရင်ခံစာတွေ ရေးပေးဖူးသကိုး။ ဒီတော့ ဒီလူကြီး ယောက်ကျားပီသမယ်ဆိုတာ ယုံကို မယုံတာပါဗျာ။
ကျိုက်မရော ရဲ စခန်းမှ ကိုပါကြီးမိန်းမ မသန္တာသို့ပြန်စာတစ်စောင် ပေးပို့ 
လက်မခံချင်ပေမယ့် အမျှ ဝေခဲ့ရပြီမင်းမဲ့စရိုက် ဝါဒီ ကျဆုံးပါစေ
သူမရဲ့စစ်ရေးအမြင်သည် ရန်သူအားငံပြာရည်နှင့်ပက်မဲ့သူ တွေထက်သာမယ်
သားပါကြီး အကြောင်းကြားရလို့ များစွာ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀ထဲက ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာ အန်တီတို့ နဲ့ ပါဝင်လာတာ ကိုသတိရနေပါတယ်။
အခက်အခဲအမျိုးမျိုးအတွက် ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအားလုံး ပါကြီးအတွက် စိတ်မချမ်မြေ့ခဲ့ရသလို
ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့တရားရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်း မြင်တွေ့ ရဖို့မျှော်လင့်နေရဖို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
သားပါကြီး ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ။သမီးတို့မိသားစုအတွက် စိတ်ပြေစေနိုင်မယ့် တရားမျှတမှုရရှိပါစေ။
ဒီတခါတော့ CSILA နဲ့ ကျနော် ပို့စ်တင်တာ တူသွားပြီ။
ဟိုတနေ့ကကျနော် ပို့စ်တင်ဘူးတယ် မှတ်မိလား။
သူဌေးသား ကို ကျွန်းမှာ တွေ့တယ် လို့ ပြောတာ ဘယ်သူက စပြောတာလဲ။ နောက်ကျရင်ပို့စ်တင်ပေးမယ် ဆိုတာလေ။
ကျနော် မအားသေးလို့ မလုပ်ဖြစ်တာ အခုမှပြီးတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ CSI ကို သွားကြည့်တော့ သူလည်း အဲ့ဒါကို တင်ထားတယ်။
ဒီအမှုကို စိတ်ဝင်တစား လိုက်နေတဲ့သူတွေကို အစိုးရက လိမ်လို့ မရဘူး။
ဒီကိစ္စကို ကျနော် တင်ဘို့
၁) ကျနော် CSI LA ရဲ့ ပို့စ်အဟောင်းတွေကို ပြန်ရှာရတယ်။
ကျနော်ဘာကိုထောက်ပြချင်လဲ ဆိုတော့ CSI LAဟာ ၂၄ ရက်အထိ သူဌေးသား အကြောင်းကို တစက်မှ မပြောသေးပါဘူး။
Sean က သူ့ကို AC က ဖီးမွန်က ချိန်းခြောက်တယ် လို့ ပြောပြီး နောက်နေ့၂၃ ရက် နဲ့ ၂၄ ရက် စက်တင်ဘာမှာ တယောက်ကတော့ ဘန်ကောက်ကို ပြေးသွားပြီလို့
နယ်မြေ ၈ က ရဲမှူးးကိုယ်တိုင် ပြောသွားပါတယ်။ အဲ့တယောက်ဆိုတာ သူဌေးရဲ့ သားကို ဆိုလိုတာပါ။
သဘောက သူတို့ ကို တယောက်ယောက် သတင်းပေးလို့ သူဒီလိုပြောရဲတာပါ။
နောက်တော့ သူတို့တွေ အကုန် အဖျား ရှူးး ပြီး ၃၀ ရက်မှာ မီဒီယာက ဖွလို့တဲ့။ ဘယ်မီဒီယာကမှ မဖွဘူး.. ကျနော်သိတယ်။
( In fact Hannah Witheridge and her three friends had signed up for the Koh Tao Pub Crawl on September 12th when, as usual, more thanafew locals tagged along as well. Author . Andrew )
ဟဲနာနဲ့ သူငယ်ချင်း ၃ယောက်က ၁၂ ရက်နေ့ညက Chopper ကလုပ်တဲ့ Pub Crawl မှာ သွားခဲ့ပါတယ်။ ပုံမှာ Sean လည် အဲ့ဒီပွဲကို တက်တဲ့သဘောရှိတယ်။ သူတို့ ၃ယောက် အဲ့ဒီပါတီကို တက်တဲ့ အထိက ပြောစ၇ာ မရှိပါဘူး။
သို့ပေမယ့်...................... တပတ်မှာ ၃ ရက် ပုံမှန် ဓာတ်ပုံ ရာနဲ့ ချီတင်ဖေ့ဘုတ်က ၁၂ ရက် အပါဝင် ၈ရက်၊ ၁၀ရက် ည က ပါတီပုံတွေ လုံးဝမတင်ထားပါဘူး။ why?????
There is no record photos for 8,10,12 of September in their page.
၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဟဲနာတို့ ပုံက Andrew ရဲ့ သတင်းထဲက ယူထားတာ ဖြစ်တယ်။
ဟဲနာ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြမှာပဲ တကမ္ဘာလုံး ကသိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဖက်ဖက်က နံမယ် ပျက်သွားတဲ့ AC မှာ လူဝင်နည်းသွားပေမယ့် ဟဲနာတို့အုပ်စုလိုက် နောက်ဆုံးထိုင်ခဲ့တဲ့ Chopper Bar ကတော့ စီးပွားမပျက်သေးဘူး။ အေးဆေးပဲ။
ဟို လက်စွပ်ဝတ်တဲ့ နှဖူးမှာ အမှတ်ကြီးပါတဲ့ (ကျနော် DNA စစ်ခိုငးတဲ့ ၃ ယောက်ထဲက တယောက်) သူနဲ့ Chopper က ပက်သက်မှု ရှိတယ်။
အောက်က ပုံတွေက ၃၁ ရက်ညက သရဲပါတီလုပ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ Chopper bar က ၁ပတ်မှာ ၃ ရက် ဒီလို show မျိုးတွေ လုပ်ပေးတယ်။ Monday ၊ Wednesday , and Friday က show ပွဲကြတွေဖြစ်တယ်။
Chopper သူဌေးဟာ ကျွန်းရဲ့ တ၀က်လောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး ရဲတွေပေါ်မှာ သြဇာညောင်းလှတဲ့ God Farther တယောက်လို သတ်မှတ်ခံရတဲ့သူတယောက်ပါ။